Ny raharaham-barotra dia manome fahafahana maro hanaovana ny vola, fa ny sehatra vitsivitsy amin'ny indostria ihany no hampakatra ny toetra amam-panahinao.
Aza miditra fotsiny amin'ny vidiny Alefa satria ny olon-drehetra fantatrao dia manao izany, mijery ny tenanao amin'ny fomba tsara sy mivoatra, inona ny fahaiza-manaonao voajanahary, inona no hafanam-po aminao, inona no mahasarika anao - ireo no singa izay mitazona anao rehefa mandeha mafy ny fotoana.
Mety mety ho mpivarotra voajanahary ianao miaraka amin'ny fifantohan-tsasatra fohy mba hahafahanao manangom-bokatra ary 'mandondòna' amin'ny saram-pandehanana mety ho anao, mety ho lasa lava be ianao mba hahitana ny tany sy ny fampivelarana trano iray isan-taona mety ho ny kitaponao, azonao atao Ho olon'ny olona fa tsy tsara amin'ny raharaha ara-bola izay mitantana ny fahafahana misafidy dia mety mifanaraka aminao tsara, mety manana fandeferana ambany noho ny tsy fahazoana antoka ianao amin'ny volana 6 ho voamarina fa ny fahamendrehan'ny tenanao dia hamitaka anao! Noho izany, ny orinasa lava vahana na fampiasam-bola amin'ny fivarotana lavanty ara-barotra lava dia mety hanome anao ny kalitaon'ny fiainana izay mahafinaritra.
Aza miditra ao amin'ity sehatra ity fotsiny mba hanaovana ny vola satria ny safidy dia raha tsy mahafinaritra anao ny zavatra ataonao dia tsy hanome azy ny tsara indrindra ianao, tsy hanosika anao hitsambikina avy eny am-pandriana rehefa ora vitsy monja, hamaha olana amin'ny ohatra, hamela anao Ny zavatra dia mihodina raha tsy te hanao zavatra ianao.
Ny fiainana sy ny raharaham-barotra dia mandeha, rehefa mahatratra ny tanjonao ianao dia tsy maintsy mitady tanjona iray hafa - ny fotoana eo amin'ny fametrahana tanjona iray ary ny manatanteraka azy dia antsoina hoe "Fiainana", raha tsy ankafizanao ny "Fiainana" inona ny teboka?
Omeo ny fanomezana tsara indrindra eo amin'izao tontolo izao ianao - manangom-bola ny vola amin'ny fanaovana zavatra izay tianao ataonao - dia tsy mitsahatra miasa. Lasa 'Lifestyle' ary iray izay noforoninao ho anao manokana izany. Miezaha hanatsara ny fomba fiainanao mandra-pahitanao mahita ny entana ao amin'ny indostrian'ny fananana izay mahafinaritra anao, mahaliana anao ary afaka ho lasa manam-pahaizana ianao-izay ny fahombiazanao amin'ny ambaratonga maro dia azo antoka.
Raha mieritreritra ianao fa afaka manampy anao hahomby amin'ny fomba rehetra, na raha misy fanontaniana, aza misalasala mifandray!
Ity famoahana ity no voalohany amin'ireo maro izay hifantoka amin'ny lafiny samihafa amin'ny indostrian'ny indostria britanika mba hijery ireo boky vaovao.